यस्ता हुनेछन् प्रदेशका कार्यालय र... :: चन्द्र काफ्ले :: Setopati
प्रदेशको राजधानी कहाँ होला ? प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, सभामुख र मन्त्रीहरू को–को बन्लान् ? यी प्रश्नको जवाफसँगै प्रदेश सरकारअन्तर्गतका कार्यालय र उच्च पदस्थहरूको निवासको संरचना कस्तो होला भन्नेबारे पनि अहिले सबैमा चासो छ । यो खबर सुरेशराज न्यौपानेले आजको कान्तिपुरमा लेखेका छन्।
मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार प्रदेश प्रमुख कार्यालयको कुल क्षेत्रफल १६९ वर्गमिटर हुनेछ । जसमा कार्यकक्ष, बैठक कक्ष, पीए कक्ष, पीए प्रशासनिक कक्ष, प्राइभेट कक्ष र शौचालय रहनेछन् । प्रमुखको कार्यकक्षमा करिब २६ लाख रुपैयाँको फर्निचर लाग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसैगरी, प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालय ९८२ वर्गमिटरको हुनेछ, जसमा मुख्यमन्त्रीको कार्यकक्ष, बैठक कक्ष, निजी तथा प्रशासनिक कक्ष, प्रतीक्षालय रहनेछन् । मुख्यमन्त्रीको कार्यकक्षको क्षेत्रफल मात्रै १६९ वर्गमिटर हुनेछ । त्यसबाहेक सोही कार्यालयअन्तर्गत नै एक जना प्रदेश मुख्य सचिवको कार्यकक्षसमेत रहनेछ । जसअन्तर्गत एउटा कार्यकक्ष, बैठक कक्ष, पीए कक्ष, एउटा प्रतीक्षालय र प्राइभेट कक्ष रहनेछन् । त्यसैगरी मुख्यमन्त्रीको कार्यालयअन्तर्गत नै ४ जना सहसचिव, ११ जना उपसचिव, २५ जना शाखा अधिकृत, १४ जना नासु र १२ जना सहयोगी कर्मचारी बस्ने ठाउँसमेत हुनेछ । मुख्यमन्त्रीको कार्यकक्षका लागि मात्र करिब २० लाख रुपैयाँको फर्निचर लाग्ने अनुमान मन्त्रालयको छ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, पुस २२, २०७४, ०५:०८:३७